Nnukwu atụmatụ maka Minista njem nlegharị anya Jamaica na UK na Middle East
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Nnukwu atụmatụ maka Minista njem nlegharị anya Jamaica na UK na Middle East
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Onye ndu njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ nke nwere atụmatụ Jamaica hapụrụ UK na Middle East. O nwere nnukwu atụmatụ, nnukwu atụmatụ, na nnukwu nrọ.
N'ịgbaso ọmarịcha ahịa ya nke ọma na North America, Minista njem, Hon. Edmund Bartlett hapụrụ agwaetiti ahụ ụnyaahụ, ya na ndị otu ọkwa dị elu ga-enyocha ohere itinye ego na ịkwalite njem njem na Jamaica si United Kingdom (UK) na Middle East.
Tupu ọpụpụ ya, Minista Bartlett kwuru, "Ka anyị na -achọ ime ngwa mgbake nke ụlọ ọrụ njem, m ga -eduga ndị nnọchi anya United Arab Emirates (UAE), Saudi Arabia na United Kingdom. inyocha ohere maka itinye ego itinye ego na mba ofesi (FDI) na mpaghara njem nlegharị anya anyị yana ndị mbata sitere n'ahịa isi mmalite nke atọ anyị. "
O kwuru na itinye ego ga -arụ ọrụ dị mkpa na mgbake ndị njem site n'inye ego dị mkpa iji wuo ma kwalite ọrụ dị mkpa maka mmepe na uto ikike ikike njem.
Blitz na -amalite site n'ichebe ya ahịa njem na Dubai World Expo 2020 na United Arab Emirates. Jamaica so na ihe karịrị ndị ngosi ihe ngosi 190 na ngosi ahụ nwere pavilion na -egosipụta ngwaahịa na ihe ọhụrụ na -aga ebe a n'okpuru isiokwu "Jamaica mere ya ka ọ gaa", na -ejikọ ụwa site na egwu pụrụ iche, nri, egwuregwu, na akụkụ ndị ọzọ nke ihe nketa ya bara ụba.
Mgbe ha nọ na UAE, Minista na ndị otu ya ga -ezute ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya nke mba ahụ ka ha kpaa maka mmekorita na itinye ego na njem nlegharị anya na mpaghara; Atumatu njem njem Middle East; na ịnweta ọnụ ụzọ maka North Africa na Eshia, na mmezi nke ịnya ụgbọ elu. Ọzọkwa, a ga -enwe nzukọ na ndị isi nke DNATA Tours, otu onye na -ahụ maka njem nlegharị anya na UAE; ndị otu Jamaican Diaspora na UAE; na isi ụgbọ elu atọ dị na Middle East - Emirates, Ethiad na Qatar.
Site na UAE, Minista Bartlett ga -aga Riyadh, Saudi Arabia, ebe ọ ga -ekwu okwu na 5th Afọ ncheta nke atụmatụ itinye ego n'ọdịnihu (FII). FII nke afọ a ga-agụnye mkparịta ụka miri emi gbasara ohere itinye ego zuru ụwa ọnụ, nyocha nke ọnọdụ ụlọ ọrụ, yana ịkparịta ụka n'adịghị n'etiti ndị isi, ndị isi ụwa na ndị ọkachamara. Onye ga -eso ya bụ Senator Hon. Aubyn Hill n'ọkwa ya dị ka Minista na -enweghị Pọtụfoliyo na Ministry of Economic Growth and Job Creation (MEGJC), nwere ọrụ maka mmiri, ala, mpụga usoro azụmahịa (BPOs), ikike mpaghara mpaghara pụrụ iche nke Jamaica na ọrụ pụrụ iche.
Ibuli ndụmọdụ gọọmentị UK n'oge na-adịbeghị anya megide njem niile na-adịghị mkpa na Jamaica emeghere ụzọ maka Minista Bartlett iduga otu ọkwa dị elu na London, Ọktọba 30 ruo Nọvemba 6, na-ezubere ahịa UK. A ga -enwe mkpakọrịta dị mkpa na Virgin Atlantic, China Forum na British Airways na World Travel Market London (WTM), otu n'ime nzukọ kwa afọ kacha mkpa maka mpaghara njem mba ofesi.
Ọzọkwa, onye minista na -ahụ maka njem ga -abụ onye ọbịa pụrụ iche na 9th Nri nri abalị nke Association Njem Njem Pacific Asia. N'ịga n'ihu n'ọrụ mba ụwa ya, ọ ga -esokwa na UN World Tourism Organisation, World Travel and Tourism Council na WTM Minister 'Summit.
Usoro njem a juputara na -agụnye ajụjụ ọnụ mgbasa ozi, itinye aka na mkparịta ụka na City Nation Place Global Conference na London, nzukọ ọgbakọ nke Global Tourism Resilience na Crisis Management Center (GTRCMC), yana nzukọ ya na ndị obodo Jamaica na UK.